My Thoughts My Blog: May 2008
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါ မောင်နှမများ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဘိုကလေးသို့ ထပ်မံသွား ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိထားသောကြောင့် သွားမည့်နေရာ နှင့် လှူဒါန်းရမည့် ပစ္စည်းများအား စုံလင်စွာ ယူဆောင်သွားပါတယ်။ လှူဒါန်းမှု ပစ္စည်းများမှာ နိုင်ငံတကာမှ စေတနာရှင်များ ပေးပို့သော အလှူငွေ များမှ ၀ယ်ယူ လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ၂၀၀ကျော် စာအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမဲ့ ကျေးရွာငယ်လေးဟာ ဘိုကလေးမြို့မှ ရေလမ်းဖြင့် အသွားအပြန် ၆ နာရီခန့် သွားရပါတယ်။ အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း ၂၀၀ နီးပါခန့်ရှိသောပါတယ်။ ရွာငယ်လေးမှာ ခရစ်ယာန်များ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များ စုပေါင်းနေထိုင်သော ရွာငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ရွာငယ်လေးမှ မည့်သည့် စေတနာရှင်များမှ လာရောက်ခြင်းမရှိသော ရွာငယ်လေးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ မေလ ၂၃ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန် ဆုံရပ်မှ စတင်ထွက်ခွာပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ တွံတေး ဒေးဒရဲ လမ်းဘက်က သွားပါတယ်။ ၁၁ နာရီကျော်လောက်မှာ ဒေးဒရဲ မြို့ကိုရောက်ပါတယ်။ ခဏ နားပြီး ထမင်းစားပါတယ်။ ပြီးဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာတော့ ရေစို၍ ပျက်စီးနေပြီ ဖြစ်သော စပါးများကို နေလှန်းထားတာတွေ တောက်လျှောက်တွေ့ရပါတယ်။ လမ်းဘေးဝဲယာတင်မကပဲ လမ်းမပေါ်များမှာပါ တက်ပြီးလှမ်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ နေ့လည် ၂ နာရီကျော်တွင် ဘိုကလေးမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုနောက် ခေတ္တတည်းခိုမည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် လှူဒါန်းမည့် ပစ္စည်းများအား ချပါတယ်။ ထို့နောက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အားလှူဖွယ် ပစ္စည်းများကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါတယ်။ ထိုနောက် ခဏနားပြီး နောက်တစ်နေ့အတွက် အစီအစဉ်များကို ဒေသခံများနှင့်ရော ဆရာတော် နှင့်ပါ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပါတယ်။ သွားရမည့် ရွာမှာ အကူအညီလိုအပ်နေသော ဘိုကလေးမြို့နှင့် အသွားအပြန် ရေလမ်း ၆ နာရီခန့်သွားရမည့် နေရာတွင် တည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လိုအပ်သော စက်လှေကို ငှားရမ်းရပါတယ်။ ခရီးစဉ်အတွက် အားလုံးစီစဉ်ပြီးသည် နှင့် ရေမိုးချိုးပြီး နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၄ နာရီ ခွဲနေပါပီ။ ဆရာတော်၏ အကူအညီကြောင့် နေရထိုင်ရတာ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့အဖွဲ့ ရေချိုး ပြီးနောက် မြို့ထဲသို့ ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ မြို့ထဲတွင် လည်ပတ်ပြီးနောက် နောက်တစ်နေ့ အိပ်ရာစောစော ထရမည်ဖြစ်သဖြင့် တည်းခိုရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ မနက် ( ၂၄.၅.၀၈) ရက်နေ့တွင်စောစောထပြီး ကျွန်တော်နှင့် ဘာညာက မြို့ထဲသွားပြီး စီစဉ်စရာ ရှိတာများ စီစဉ်ပါတယ်။ ကျန်သူများက အထုပ်အပိုးများကို စက်လှေပေါ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူနေကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ မနက် ၈ နာရီ တိတိမှာ ဘိုကလေးမြို့မှ စတင် ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ လှေပေါ်တွင် နေရာချထားပြီးသည်နှင့် ကျွန်တော် တို့အဖွဲ့ဟာ အသက်ကယ် ရေကူးဝတ်စုံများ ၀တ်ဆင်လိုက်ကြပါတယ်။ ရေမှ မကူးတက်ကြတာကိုး။ ရာသီဥတု ကလည်းသာသာယာယာပါ.. လှိုင်းလေများက လည်းငြိမ်သက်နေပါတယ်။ မြစ်က ကျယ်ပါတယ်။ရေထဲမှာ ဗေဒါတွေကလည်း ဟိုမှသည် မျောနေပါတယ်။ ဂဏာန်းငယ်လေးများမှာလည်း ရေထဲတွင် ကူးခတ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လှေမှာ သာသနာ အလံလေးများ တပ်ထားပါတယ်။ အလံများမှာလည်း လေထဲတွင် တလွင့်လွင့် ဖြစ်နေပါတယ်။
မြစ်ကမ်းပါး တစ်လျှောက်မှာတော့ ပြိုလဲနေသော သစ်ပင်များ၊ အမိုးအကာ မရှိတော့ သော တဲငယ် တဲကြီးများ၊ ထီးတော်တွေ မရှိတော့သော ဘုရားစေတီများ၊ ပျက်စီးနေသော ဆန်စက်များ နှင့် မုန်တိုင်းဒဏ် သင့်ထားသော မြင်ကွင်းများက ပြည့်နှက်လို့ နေပါတယ်။ လှေပေါ်မှာ ကိုက်တက်သော ပုရွက်ဆိတ်ကောင် အမဲလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် အဖွဲ့ ထိုအကောင်လေးများနှင့် ရန်ဖြစ်ရသေးပါတယ်။
ဒေသခံ ဦးလေးကြီးတွေ အပြောအရ မြစ်ကမ်းပါး တစ်လျှောက်မှာ ရွာတွေ ၁၂ ရွာကျော်လောက် ရှိပြီး အဲ့ဒီမှာ လူတွေ အသေအပျောက်များတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီဘက်တွေ သွားကြည့်ရင် လူသေအလောင်းတွေနဲ့ အရိုးတွေကို ခုထိတွေ့နေ နိုင်သေးတယ်ဟု့ပြောပါသည်။ လမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ လူသေအလောင်း လေး ငါးလောင်း လောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အချို့အလောင်းများမှာ ကမ်းစပ်တွင် သစ်ကိုင်းနှင့်လက် ချိတ်မိပြီး သေနေသည်များ ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် မိန်းမလှ ကျွန်းမှာလည်း အစ်ဆစ်လိုမိုးမျိုး ရွာသွန်းလိုက်သောကြောင့် သစ်ပင်များမှာ ချောက်သွေ့နေပါတယ်။ မျောက်တစ်ရာ ဘုရားကိုလည်း လှမ်းပြီး ဖူးမြော်လိုက်ရပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် တို့စက်လှေဟာ ကျွန်တော်တို့ သွားမည့် ရွာလေးသို့ ဆိုက်ရောက်လာပါတယ်။ ရွာမှ ကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံ နှင့် အရင်ဆုံးတွေ့ပြီး စကားပြောကြပါတယ်။ ထို့နောက် ရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားပါတယ်။ စက်လှေပေါ်က ပစ္စည်းများကို ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ရှေ့ဦးစွာရွှေ့ပြောင်းပါတယ်။ ထို့နောက် ဆရာတော်အား သင်္ကန်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါတယ်။ ပြီးနောက် ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကိုရင်ကြီး တစ်ပါး၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ရွာသူရွာသားများ အား အိမ်ထောင်စုအလိုက် တန်းစီးခိုင်းပြီး ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ၂၀၀ နီးပါ ( လူဦးရေး ၉၀၀ ) ကိုပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအတွက် သီးသန့်သုံး ပစ္စည်းများကိုလည်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ်များအတွက်လည်း ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ အတိုင်း ပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ ညနေ ၂ နာရီကျော်တွက် အဆိုပါ ရွာလေးမှာ ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အချိန်မှီလေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ စက်လှေ ထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲ့ဒီရွာလေးဘက်မှာ မိုးတွေ သည်းကြီးမည်းကြီးရွာနေတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပြန်လမ်းမှာတော့ တနေကုန် ပင်ပန်းထားသောကြောင့် အိပ်ပြီလိုက်လာပါတယ်။ ခေတ္တအိပ်စက်ပြီးနောက် ပြန်ထလာပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားစမြည်းပြောကာ လိုက်ပါလာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်း ဘိုကလေးမြို့သို့ ညနေ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သွားခဲ့သော ရွာလေး၏ အနီးအနားတွင်လည်း ယခုထိ အကူအညီများလို အပ်နေသေးသော ရွာများရှိကြောင်းကို စုံစမ်းမေးမြန်းလာခဲ့ပီး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်သွားရန် တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ ယခုလို သွားရောက် လှူဒါန်းသော ပစ္စည်းများမှာ နိုင်ငံတကာမှ စေတနာရှင်များ၏ စေတနာ ဒါနများဖြစ်ပြီး ထိုသူများအား ဒုက္ခသည်များကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင် မိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ကြသူများမှာ ကျွန်တော်၊ ကိုဂေါက်၊ ရောင်းသူ ၊ ဘာညာ နှင့် ၀င်းဇော်ထိုင် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ သွားရောက်လှူဒါန်းသော ပစ္စည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
1- Steel Bowl 1 ps
2- Spoon 1 ps
3- I bar of Soap 1 ps
4- Bath Soap 1 ps
5- Tooth Paste 1ps
6- Tooth Brush 1 ps
7- Slipper 1 ps
8- Clothes 1 ps
9- Medicine (Cold Tablets, Hansaplus, Dehydration Salt)
10- Candle 1 pack
11- Gas- Lighter 1 pack
12- Detergent 1 pack
13- Sardines2box
**Others Things included are
200 monk robes
Sanitary Napkins and Underwear for Women
Doctors prescribed Medicine.
The estimate is million kyats.
ပစ္စည်းစာရင်းများ မှာ ကိုဘလာဂေါက် ဆီမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သွားရောက် လှူဒါန်းမှု မှတ်တမ်ဓာတ်ပုံများအား ကိုဘလာဂေါက်ဘလော့ဂ် တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျား…
မောင်ဖိုးသူတော် ( ၂၆.၅.၀၈)
ရေးသားသူ phoe thu taw at 6:53 PM
မင်းပြောတဲ့ တောင်ဇလပ်နီနီနဲ့ .
အခုပဲ ဘိုကလေးက ပြန်ရောက်ပါတယ် ။( ၁၆.၅.၀၈) နေ့လည်။ ကြားသမျှနဲ့ တွေ့သမျှ ၊သတင်းတွေကို တင်လိုက်ပါတယ် ။ ဘိုကလေး ကနေ ရေလမ်းခရီးတမျိုးတည်းနှင့်သာ ဆက်၍သွားနိုင်သော ရွာများတွင် သေဆုံးမူနှင်. ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေသော ရွာလုံးကျွတ်ခံလိုက်ရသောရွာတချို့မှာ -
နောက်ပိုင်းရွာများကတော့ ပင်လယ်နဲ့နီးပြီး လှိုင်းကြီးသဖြင့် စက်လှေနဲ့သွား၍မရပါ။ပင်လယ်ကောင်ပာု ဒေသခံများ ခေါ်သော ပင်လယ်သွားသဘောင်္များ နှင့်သာသွာနိုင်ပါတယ်။
စက်စု နှင်. ပျဉ်မိုးကြီး ကျေးရွာများ မှာ မုန်တိုင်းကာလတွင် အိမ်ခေါင်မိုးအထိ ၊ အုန်းပင်အမြင်.ထိပ်ဖျားအထိ နှစ်မြုပ်ခဲ. သည် ။ အိမ်ခြေ ၅၀၀ကျော်ရှိခဲ.သော စက်စုရွာ တရွာထဲလျှင် ယခု လက်ရှိ လူဦးရေ (၈၀)သာကျန်တော.သည်။ထို.နည်းတူဘိုကလေးမြစ်ရဲ့ဘယ်ဖက်အခြမ်းရွာစဉ်များမှာ
အနောက်ပိုင်းရွာများတော.မသိတော့ပါ ။ ထိုဖက်မှ ကြိမ်ချောင်းကြီး ရွာမှာလည်း လူများ ၈၀၀ကျော်မှာ ၈၀ကျော်သာ ကျန်ရှိတော.တယ်လို.သတင်းရပါတယ် ။လှိုင်းဖုံး ၊ ဧရာတန်း ၊တုံးလော ရွာများတွင်လည်း ရွာလုံးကျွတ် ပျောက်ပျက် သေကြေပျက်စီးသည်ပာုသိရသည် ။ ထိုရွာများသို့ ထိရောက်သော ကယ်ဆယ်ရေး မရောက်သည်.အပြင် ။ လမ်းပန်းခရီးဝေးကွာခြင်း ၊ ရေလမ်းသာ အသုံးပြ၍သွားလာနှိင်ခြင်းတို.ကြောင်. လူပုဂ္ဂိုလ် အလှူရှင်များလည်း မရောက်ရှိပေ ။ထို့ကြောင့်ထိုရွာများမှာ အသက်ဘေးအတွက် အများကြီး အကူညီအများဆုံးလိုအပ်နေကြောင်းပြောပရစေ။နောက်တခုကကြိမ်ချောင်းကြီး က ဘိုကလေးကို လာတဲ. ဒုက္ခသည် ယောက်ကျားလေး ၅ယောက်ရဲ. အပြောအရ " ၅ရက်လောက် ကျနော်တို.လမ်းမှာ အုန်းရည်နဲ. အုန်းသီး စားပြီးလာရတယ်ဗျာ ။ ကယ်ဆယ်ရေး လှေကိုလှမ်းခေါ် ပေမယ်. လည်း လှည်.တောင်မကြည့်ဘူး ။ ပြီးတော. ကယ်ဆယ်ရေးလှေတွေက မိန်းကလေးတွေ ဦးစားပေးတင်တာလေ ။ ရေဆိုဝတ်တွေက လေးတယ်ဆိုပြီး အားလုံးကိုယ်တုံးလုံးနဲ.လိုက်ရတာ ။ ပာိုရောက်မှ (ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း) မှာ လူသေတွေဆီက အ၀တ် နဲ. ဒါမှမပာုတ် လှူတဲ.အ၀တ် နဲ့နေ ရတာ ။ ပြီးတော့ အ၀တ်များမရှိရင် ဂုံနီအိပ် ပတ်ပြီးနေ တဲ့ ။
နောက်တယောက်က အခုလည်း မအူပင်စခန်း ကို ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ သန်.ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်ခိုင်း စစ်ကားပေါ်တင် ၍ မအူပင် က အကျဉ်းဦးစီး (ကျောက်ထုစခန်း) ကို ပို့နေတယ် ။ မလိုက်ချင် တဲ့လူ ကိုယ့်ရွာကိုယ်ပြန်တဲ့ ။ ဘယ်လိုပြန်ရမှာလည်းဗျာ ။ ကျနော်တို့ အကူညီ နဲ. အစားသောက်ရဖို့ အသက်ရှင်ဖို့ ဘိုကလေးကိုတောင် ၅ရက်တိတိ အလောင်းတွေ၊ ဒုက္ခတွေ မျိုးစုံဖြတ်ပြီးလာရတာ ။ မလိုက်ပဲ အခုလှည့်ပြီး အကူညီတောင်းနေတယ် ။ ကျောက်ထု စခန်းမှာလည်း တရက်၁ထောင်ပေးပြီး အတင်းခိုင်းနေလို. ထွက်ပြေးတဲ.လူတွေပြေးကျတယ်လို.ကြားတယ် ။ အကျဉ်းသားမပာုတ်ပဲ အကျဉ်းကျခံတော.မနေဘူး ကျနောတို. ရသမျှလုပ်ကိုင်စားသောက်မယ်ဆိုပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအရွေ့မှာ ထွက်လာတာပါ လို့ဆိုပါတယ်။
မော်ကျွန်းမှ ပြန်လာသော လူတွေ အပြောအရ မော်ကျွန်းဘေးမဲ့ဒီရေတောတွင် အလောင်းများ ပုံနေကြောင်း ၊ မရှင်းလင်းရသေးကြောင်းကြားသိခဲ.ရသည်။ အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်သော လူသေစာရင်းထက် ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသော လူသေစာရင်းများကပိုပြီး ကိန်းဂဏန်းကြီးနေတယ်။ ရွာလုံးကျွတ်စာ မြေကွက်လပ်ကြီးများ ၊ အိမ်အပျက်အစီးများနှင့်လူသေ အလောင်း၊ တိရစ္ဆာန်အလောင်းတွေ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ. တွေ.လာရ၍ စဉ်းစားမိတာ တခု က တော့ ကျေးလက်တောရွာတိုင်းတွင် တိကျတဲ. သန်းခေါင်စရင်းမရှိနိုင် ။ ပြီးတော့ ကလေးဦးရေ အရည်အတွက် ပိုမို များပြားနိုင် ၊ ကျေးလက်နှင့်မြို့ ကြားမှ လယ်ကွင်းများမှာနေသောလူများ ၊ လမ်းမမှာနေသောအိမ်တန်းများ ၊ တံငါရွာလေးများ ။ ထိုသောနေရာများတွင် စာရင်းအတိကျမရှိ၍ ကျနော်ကြားသမျှ သေဆုံးသူလူဦးရေ ကွဲလွဲချက်ပာုထင်မိပါသည်။
ကမ်းနားနှင်.ဆိပ်ကမ်း ထောက်လျှောက်မှာလည်း စစ်ကားများဖြင်. မော်ကျွန်းသို. သွပ်၊ တာလဘက် ၊ ဆန် ၊ ရေသန်.၊ နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ပို.ဆောင်ရန် သဘောင်္ပေါ်သို.တင်နေသည်ကိုတွေ.နေရပါတယ် ။ ဘိုကလေးတွင်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကို
တို.တွင်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ အပြည့်ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ဘယ်မှဖြန့်ဖြူးသည်၊ ဘယ်သို့ပိုဆောင်သည်လည်း မသိကြောင်း၊ ဘယ်မှလည်းမရောက်သေးကြောင်း ထိုအထဲမှလူများအဆိုအရသိရသည်။
မော်ကျွန်းသို့ အခုတွင် သွပ်များပို.ဆောင်နေပြီး VIP လမ်းကြောင်းတလျှောက် အမိုးပြုပြင်ရန်အတွက် ပာုဆိုသည် ။လက်ရှိဘိုကလေးတွင်လည်း သွပ်တချပ်ကို ၅၀၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ. VIP လမ်းကြောင်းအတွက် လက်ငင်းပေးလျှင် လိုသလောက်ယူစနစ်ဖြင့် ရောင်းချနေသည်ကို တွေ့ရသည် ။နောက်သတင်းတခု မှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ချထားပေးသော ကြက်သွန်အိပ်နှင်. အာလူးများပုတ်ကုန်သဖြင်. ၀န်ကြီး မှ ဒေသခံတာဝန်ခံကို ပါးရိုက်သွားသည်ပာုပြောသည် ။ လိုအပ်ချက်များ အတိုင်းတခါတည်း ချပေးနေသည် ။ ဒါပေမယ်. ဖြန့်ဖြူးမူ မတိုးတကလာ၍ အကုန်အလကားဖြစ်ကုန်သဖြင့်ရိုက်သွားသည် ပာုသိရသည် ။ ဒေသတာဝန်ခံများလည်း ဖြန်.ဖြူးမူများ နှောင်.နှေးမှုများ အလွန်ရှိသည် ။ ပထမနေ့တွင် ၀န်ကြီးမှာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် ဖိနပ်များမရှိသည်ကို တွေ.၍ ဖိနပ်များ မှာကာချက်ချင်းပို.ဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း နောက်တခေါက်ပြန်အလာတွင်ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ဖိနပ်များ ဒီအတိုင်းပဲတွေ.ရ၍ ၀န်ကြီးဒေါသပိုထွက်ခဲ့သည်ပာုဆို သည်။ ကျနော်တို. ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ရိက္ခာပေးသည်.နေရာတွင် လူတန်းအရှည်ကြီး လူပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်ခန်. တန်းစီနေသည်ကိုတွေ့ရ၍ မေးမိသည်မှာ တစ်အိမ်ထောင်အတွက် ဆန် ၄လုံး ၊ အာလူး ၆လုံးပေးနေသည်ပာုဆိုသည် ။ မြို.ပေါ်တွင် ပေးသော ဆန်နှင့် အစားအစာမှာ အင်မတန်မှနည်းပါး သဖြင့် သူတို့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများဖြေရှင်းရန် အကူညီများလိုအပ်နေဆဲပာုသုံးသပ်မိသည် ။ ထို.အပြင် မြို.ပေါ်တွင် ထိုမျှသာပေးလျှင် အခြားရွာများတွင် လေလမ်း၊ရေလမ်းဖြင်.သာ သွားနိုင်သောနေရာတွင် ဘယ်လို အကူညီမျိုးနှင်. အသက်ရှင်နေရမလည်း စဉ်းစားမရသော ပုစ္ဆာတခုလိုဖြစ်နေသည် ။
သတင်းအချက်အလတ်များကို ပေါက်ကရ၈၀ ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူပါသည်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 4:30 PM
မေလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ တွံတေးမြို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပါ့တယ်။ မုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူများ အခြေအနေနှင့်လိုအပ်ချက်များအား သွားရောက် ဒေတာကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး တွံ့တေးတံတားမရောက်ခင် ပန်းလှိုင်တံတားမှ မိနစ် ၂၀ လောက်ဆင်းအပြီးမှာ လမ်းဘေးတစ်လျှောက် လယ်တောတ၀ိုက်တွင်ရှိသော ရွာများ အခြေအနေဆိုးဝါးလျှက်ရှိနေပါတယ်။တွံတေးတံတာကို နေ့လည် ၁၁ နာရီ ၅၀ မှာရောက်ရှိပါတယ်။ သံဖြူကျေးရွာအနီးမှာ ဒုက္ခသည်များကို စေတနာရှင်ပြည်သူများမှ ပေါင်မုန့်များ လှူဒါန်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ထိရောက်စွာမလုပ်ပေးနိုင်သေးသော အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ လမ်းသွားလမ်းလာများ၊ ကယ်ဆယ်ရေးသွားသောအဖွဲ့များမှ အစားအသောက်များပြစ်ချလေ့ ရှိဟန်တူသောကြောင့် လမ်းဘေးဝဲယာတစ်လျှောက် နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် တောင်းရမ်းနေပုံကို မြင်ရတာလည်း တစ်စက်မှ စိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းပါဘူး။
နောက်ပြီးတော့ တွံ့တေးမြို့ မရောက်ခင် ကံဘဲ့စံပြကျေးရွာ မှာလည်း အိမ်ခြေ ၉၀% လောက်လုံးဝနေလို့မရတော့တဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းကြီး ခေါင်းမိုးများအားလုံးလဲ လန်ထွက်နေပါတယ်။ ရွှေစံတော်စံပြ ရပ်ကွက်မှာတော့ တရုတ်မှ လှူဒါန်းထားသော Tent ပေါင်း ၂၁ လုံးဖြင့် မုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူများကိုထားထားပါတယ်။ ဟိုမှ ဒီမှ လာရောက်စစ်ဆေးသောအခါ ပြထားချင်ပုံရပါတယ်။ Tent ပေါင်း ၂၁ လုံးတည်းဖြင့် တွံ့တေး မြို့နယ်တစ်ဝိုက်များ ဒုက္ခသည်များအားလုံးဆံ့ရင်တော့ အရမ်းကောင်းတာပေါ.ဗျာ ။ တဲတလုံးကို မိသားစု ၂ စု ထားတယ်လို့သိရပါတယ် ။ တဲတလုံးအကျယ် က လ၄ယောက်လောက် အိပ်လိုက်ရင် ပိာုလူပ်ဒီလူးလို.တောင် မရတဲ.အနေအထားပါဗျာ ။ တဲ့အလုံး ၂၀ကျော်နဲ့ တွံတေးတခုလုံးကို ကယ်ဆယ်ထားတယ်ဆိုတော့ .... ဆက်မတွေးချင်တော.ဘူးဗျာ။
တွံ့တေးမြို့ထဲရောက်တော့ ကျနော်တို့ရန်ကုန်ဘက်လို သစ်ရွက်၊ သစ်ကိုင်း ပုံကြီးတွေ မရှိတော့သော်လည်း ဓာတ်တိုင်များကိုတော့ လုံးဝ လာရောက် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါနဲ့ကျနော်တို့တွေလည်း ယို့ယွင်းပျက်စီးနေသော ရွှေစာရံစေတီတော်ကြီး ကိုတစ်ပတ်လှည့်ကြည့် ၊ (တီဗီထဲမှာ လိုပေါ.ဗျာ လိုအပ်တာတွေကို မှာစား (အခုတော. ပါလာတဲ. ဘီစကစ်လေးကို စားပြီး) ပြန်ဆင်းလာခဲ.တယ်။
အဲ.တ၀ိုက်မှာတော. လမ်းကြောင်းလာမယ်ဆိုပြီး လမ်းရှင်းနေတဲ. ရဲတွေတော့တွေ့ခဲ့ရတယ် ။ ကဲ ... မပြောတော.ပါဘူး ။။ ဒီကောင်တွေ လူပါးဝနေတာ ကြာပြီပဲ ။
မြို့ထဲဘက်လိုမဟုတ်... ကူညီမည့်အဖွဲ့များ မရှိသော ရန်ကင်း၊ တန်းလျှားလေး ကျေးရွာများဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရွာတွေမှာ တော့ အခြေနေဆိုးတယ် ဗျာ ။ ခန့်မှန်း လူဦးရေ ၁၅၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရွာလုံးကျွတ်ကို ပျောက်သွားတာ ။ ပြီးတော့ တရွာလုံးမှာမှ အိမ်ကောင်းဆိုလို. ၃၊၄၊၅လုံးပဲကျန်တယ် ။ အဲ့ဖက်က လူတွေက လက်လုပ်လက်စား ကွမ်းရွက်ခူးတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး အခု ကယ်ဆေးရေး ၊ ထောက်ပံရေး တခုမှမရသေးပါဘူး ။ မြို့ထဲရွှေစာရံ ဘက်မှာသာ ရနေကြတာပါ ။ လူမြင်ကွင်းမှာ တဲထိုးပေးထားတဲ့လူတွေလောက်သာရနေတာပါ ။ ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ။ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ရယ်လို့ ဖွင့်လို့လည်းမရတဲ. အခြေအနေမှာ ရှိသေးတဲ့အိမ်လေးတွေပေါ် တက်နေရတယ် တဲ့ ။ စားဖို့သောက်ဖို့က တော့ အပူတပြင်းရုံးကန် လမ်းမပေါ်အထိ ကလေးနဲ့မိန်းမတွေ မကျန် တက်တောင်းရမ်း စားသောက်နေရတယ် ။ လမ်းတဖက်တချက် က လမ်းမတွေမှာ ငတ်နေတဲ.လူတွေ တက်တက်တောင်းနေတာ ရန်ကုန်နဲ. တွံတေး လမ်းမပေါ်မှာ အများကြီးပဲ ။ အသေအပျောက်တော့ နည်းတယ်လို့ကြားခဲ့ရတယ်။
တွံတေးမှ လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ရယူပြီး နေ့လည် ၁ နာရီလောက်ပြန် လှည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
အသွားတင် မိုးရွာနေသောကြောင့် လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်လျှောက်ဒုက္ခသည်များ အနည်းငယ်သာ ရှိသော်လည်း အပြန်တွင် ရာသီဥတု ကောင်းသဖြင့် လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်လျှောက်ဒုက္ခသည်များ အများအပြားတွေ့ခဲ့ ရပါသည်။ ဒီလိုနှင့် အဖွဲ့သားများ ပြန်လာကြရာ လမ်းတွင် တွံတေးတံတားအဆင်း ကားအနည်းငယ်မောင်းပြီးသော အခါ ရုံးမှလာသော ကားနှင့်တွေ့သောကြောင့် ကော့မှုး ၊ ကွမ်းခြံကုန်းဘက်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ လမ်းတွင် မောင်းတီးစေတီတော်ကြီးမှာ ထီးတော်ကြီး ပြုတ်ကျနေတာကို စိတ်မကောင်းဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကော့မှုးမြို့နယ်သို့ နေ့လည် ၂ နာရီလောက်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆင်ခြံကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ သော ပရဟိတ ကျောင်းလေးကို တွေ့ရပါသည်။ ကျောင်းရှေ့မုဒ်ဦးဝ တွင် ကလေးငယ်များ မိုးရေထဲတွင် သနားစဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ကော့မှုးမြို့နယ် အတွင်းတွင်ရှိသော ကျေးရွာအများစု၏ မူလတန်းကျောင်းများမှာ တော်တော်များများကို ပျက်စီးသွားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်များမှာလည်း အမိုးလန်ရုံတင်မက ပြိုလဲနေသည်များကိုပင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ နေ့လည် ၂ နာရီခွဲခန့်တွင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့၏ ပျက်စီးမှုများမှာ ကော့မှုးထက်ပင် များမယ်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပထမဦးဆုံး အထက (၁) သို့သွားရောက်ပါသည်။ ထိုကျောင်းရှေ့တွင် စေတနာရှင်များမှ လူတစ်ဦးလျှင် ဆန် ၂ လုံး၊ အားလူး လေး ငါးလုံး နှင့် ကြက်သွန် လေး ငါး လုံး လှူဒါန်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ထိုမှ တဖန် မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံးသို့ သွားရောက်၍ မြို့တွင်း လျှပ်စစ်အခြေအနေကို မေးမြန်းပါသည်။ လမ်းမီးတိုင်ပေါင်း ၂၃၀ ခန့် ပြိုလဲပျက်စီးသွားသည်ဟု့ ကြားသိပါသည်။ လိုအပ်တာများကိုပြောကြားပီး ညနေ လေးနာရီ ကျော်ခန့်တွင် ပြန်လာပါသည်။
အပြန်လမ်းတွင် ကျွန်တော်တို့ ကားပေါ်တွင် ပါလာသော အ၀တ်အထည် များအား လမ်းဘေးဝဲယာ ဒုက္ခသည်များအား ပေးအပ်လှူဒါန်းပါသည်။ လိုအပ်သော သတင်းဓာတ်ပုံများအား အခက်အခဲ ရှိသောကြောင့် မတင်နိုင်သေးပါ။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 1:41 PM
ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် သို့ အမေရိကန်လေတပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသော ပြည်သူများအတွက် ရေနှင့် ရိက္ခာများအား C130 လေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်ပျံ ရပ်ရမည်နေရာသို့ တက်စီဝေးမှ လာနေပုံ
အမေရိကန်နည်းတူ နိုင်ငံတကာမှလည်း အထောက်အပံ့လာရောက်ပေးပို့သော လေယာဉ်ပျံများအား ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် တွေ့ရစဉ်။
လေယာဉ်ပေါ်တက်ပြီးလက်တော့ တစ်လုံးနှင့် ဘာလုပ်နေမှန်းမသိသော လေယာဉ်ဝန်ထမ်း စစ်သားတစ်ဦးအား မှတ်တမ်းတင်ထားပုံ။
ရန်ကုန်မှ မီဒီယာ သမားအချို့လဲ ပြေးပြေးလွှားလွှားသွားရောက် သတင်းယူနေပုံ
သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတွေ စစ်တပ်မှ တာဝန်ရှိသူတွေ နှင့် သတင်းမီဒီယာများ
လေယာဉ်ပျံမှ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ရိက္ခာပစ္စည်းများ ထုတ်ယူရန်အတွက် နောက်ဖုံးအားဖွင့်နေပုံ
အမေရိကန်လေတပ် မှ MSEG Robert White နှင့် အမှတ်တရ
သူပြောကြားချက်အရ အပြင်သို့ ထွက်ကြည့်ခွင့် ရလျှင် ထွက်ကြည့်ချင်ကြောင်းပြောပါသည်။
နောက်တစ်ခေါက်လည်း ထပ်လာဦးမည်ဟု့ပြောပါသည်။ တချို့ဟာတွေလည်းပြောသေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်သူပြောတာအကုန်လုံး နားမလည်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်တွေထဲက စစ်သားတွေ စကားပြောသလို ပြောတဲ့အတွက် စာတန်းများထိုးရင်နားလည်မလားပဲခင်ဗျာ။
သတင်းဓာတ်ပုံများ ကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ အကုန်မတင်နိုင်သေးတာကို နားလည်ပေးပါ။ ပြီးတော့ တစ်ချို့သတင်းတွေကလည်း အတိအကျမသိသေးလို့။ အနားလေးကပ်ခွင့်ရတာကိုက တော်တော်ကံကောင်နေပါတယ်။ အမေရိကန်မှ ပေးအပ်တဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းကို မကြာမီတင်ပြပါမယ်။
အထက်ပါဓာတ်ပုံများအား သုံးစွဲလိုပါက အီးမေးလ်မှတဆင့် ပြောကြားပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 10:51 PM